Raayyaan Ittisa Biyyaa Silaa Nageenya Ummataaf Gaachana Malee Yaaddoo Tahuu Hin Malle – Adda Bilisummaa Oromoo
(Ibsa ABO – Mudde 15, 2018)
Guyyoota 6 dabraniif Kibba Oromiyaa naannoo magaalaa Moyaaleetti lola hidhattoota Somaalee kanneen meeshaa lolaa gurguddaa hidhachiifamaniin Ummata Oromoo naannoo sanaa irratti gaggeeffamaa jiruun gaaga’ama guddaatu lubbuu fi qabeenya Ummataa irra irra gahaa jira. Akka jiraattota naannichaa irraa hubachuun danda’ametti hidhattootni Somaalotaa kun meeshaalee lolaa gurguddoo fagootti waa rukutuu danda’anitti fayyadamuudhaan manneen barnootaa, baankiilee, manneen amantii, manneen daldalaa fi manneen jireenyaa ummataa, akkasumas, buufata poolisii rukutuudhaan barbadeessaa fi ummata fixaa jiru. Lola kana ummata irraa ittisuun dandeeytii milishootaa fi poolisoota Naannootii ol tahaa jiraachuus jiraattotni naannoo himachaa jiru.
Haala kana keessatti Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa (Ethiopian Defense Force) yeroo kaan callisee taa’ee walitti ilaaluu fi yeroo milishootaa fi poolisootni Oromiyaa humna Somaalotaa kana of irraa dhiibuu argu ammoo Somaalotaaf baabsuudhaan Oromoo irratti dhukaasaa jiraachuun baramee jira. Akka kanaan lola guyyoota 6 dabraniif gaggeeffamaa jiru keessatti Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa yeroo sadii hidhattoota Somaalotaaf tumsee kan Oromootti dhukaasuudhaan 15 ajjeesee 19 ammoo madeessuu jiraattota naannichaa irraa hubachuun danda’amee jira. Kana malees humnumti Raayyaa Ittisaa Itoophiyaa kun manneen jireenyaa Ummataa irra naanna’uudhaan namoota meesha-maleeyyii 3 ajjeesee jira. Gochaan Raayyaan Ittisaa Itoophiyaa gama biraatiif tumsee Oromoo irratti dhukaasuu fi ajjeesuu kun isa jalqabaa osoo hin taane amma duras bakkaa fi yeroo adda addaatti deddeebi’ee raaw’atamaa akka ture jiraattotni naannoo gara garaa miidiyaaleedhaaf ibsaa turuun ni yaadatama. Haalli akkasii deddeebi’ee mul’achuun (keessattuu haala yeroo ammaa kan akka adeemsa jijjiiramaa fi yeroo cehumsaatti ibsamaa jiru kana keessatti) Ummata keenyaaf hedduu yaaddessaa fi rifaasisaa dha. Raayyaan Ittisa Biyyaa silaa nageenya Ummataaf gaachana tahuu kan qabu malee yaaddoo tahuu hin malle.